အောင်မြင်သူတွေ အမြဲတမ်း ဘာကြောင့် စိတ်အားထက်သန်နေရတာလဲ.? – BaHuTuTa
Motivation (စိတ်အားထက်သန်မှု)ဆိုတဲ့ အရာဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်နေဖို့ ဆိုတာဟာ သိပ်တော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ဒါကြောင့်အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်အောင် နေထိုင်နည်းတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
(၁)ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ Why ဆိုတာကို အမြဲအဖြေရှာပါ
စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် ဒါတွေကိုလုပ်နေရတာလဲဆိုတဲ့ Why ဆိုတဲ့အမေးလိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို မသိတဲ့သူတွေအဖို့တော့ အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်က ဘယ်အရာအပေါ် စိတ်အားထက်သန်လဲ ၊ ဘာကြောင့်ဒီအရာက ကိုယ့်ကို စိတ်အားထက်သန်စေတာလဲဆိုတာကို သိဖို့တော့လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝအတွက် အမြဲတမ်းမြင့်မြင့်တွေး ၊ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားပြီး အိမ်မက်အကြီးကြီးမက်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်း သင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ်မှာ ရှုံးနိမ့်လိုက်တာနဲ့ လက်မြှောက်အရှုံးပေးဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား.?ပထမအကြိမ်မှာ မှားယွင်းမှုတွေရှိခဲ့ပါ လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်မှာ အဲ့လိုအမှားတွေကိုမရှိအောင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။စာရေးသူတို့ဟာ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့တော့ အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အမြဲတမ်း Active ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ အောင်မြင်ပြီးရင်း အောင်မြင်နေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့သူတို့ဟာ စဉ်းစားရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အမြဲတမ်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေလို့ပါ။